Ny jiro fifamoivoizana dia hifehy ny fidirana amin'ny kianjan'i St. Marka manomboka amin'ny taona 2018 | Vaovao momba ny dia
Isabel Catalan | | Italia, About us
Ny Kianjan'i St. Marka, azo antoka, no tandindon'ny tantara any Venise. Olona 40 tapitrisa eo isan-taona no mitsidika ny tanàna. Mikoriana mafy izay atahoran'ny Venetianina maro fa hisy vokany ratsy eo amin'ireo tsangambato mariky ny tanàna. Noho izany dia nanapa-kevitra ny governemanta eo an-toerana volana maromaro lasa izay fa hifehy ny fidirana amin'ity kianja mahafinaritra ity amin'ny taona 2018 amin'ny alàlan'ny fampiasana fomba isan-karazany.
Ny voalohany amin'izy ireo dia toa ny fametrahana jiro fifamoivoizana izay mifehy ny fidirana amin'ny Kianja San Marcos. Ny tanjon'ny filan-kevitry ny tanàna dia ny tsy hanidy ny lalana mankany amin'ny kianja malaza fa hanome toky ny fiarovana ireo mpizahatany sy ny mponina ao an-tanàna.
1 Inona avy ireo fepetra ireo?
2 Fa maninona no fanapahan-kevitra noraisina ity?
3 Tahaka ny ahoana ny Plaza de San Marcos?
Inona avy ireo fepetra ireo?
Ny fepetra hafa dia ny fametrahana fotoana hidirana amin'ny Plaza de San Marcos, ohatra amin'ny 10 ora maraina. amin'ny 18 hariva dia manaova famandrihana mialoha hidirana amin'ny kianja na hanidy ny faritra amin'ny vanim-potoana be atao, toy ny faran'ny herinandro sy ny volana Jolay sy Aogositra.
Amin'izao fotoana izao dia kasaina hatomboka amin'ny fametrahana ny jiro fifamoivoizana ary handinika ny fomba fiasan'ny fandraisana andraikitra. Rehefa feno mpizahatany ny kianja dia hisy jiro mena ary hiandry ny mpitsidika hafa mandra-pahatonga ny jiro ho maitso, izay hanondroana fa foana ny kianja. Ny fanisam-bahoaka dia hatao amin'ny fakantsary fakan-tsary miorina eny an-kianja ary fandaharana amin'ny solosaina no hiteny amin'ny fotoana tena izy hoe firy ny olona ao anatiny.
Ny filan-kevitry ny tanànan'i Venise dia mikasa ny hanangona avy hatrany ny angon-drakitra ary hanompo azy amin'ny alàlan'ny Internet mba hahafahan'ny mpizahatany manamarina ny isan'ny olona eny an-kianja. Tsy hisy fiatraikany amin'ny mponina na mpiasa any an-toerana io fepetra io satria hanana ny karany manokana hanamorana ny fivezivezena izy ireo.
Ity lalàna vaovao ity dia hameno ny hetra amin'ny fizahan-tany ampiharina hitsidika an'i Venise ary miovaova arakaraka ny vanim-potoana, ny faritra misy ny hotely sy ny sokajy misy azy. Ohatra, ao amin'ny nosy Venice, 1 euro isaky ny kintana isaky ny alina dia ampangaina amin'ny fotoam-pahavaratra.
Fa maninona no fanapahan-kevitra noraisina ity?
Etsy andaniny, milentika kely i Venise ary ny mpizahatany an-tapitrisany an-tapitrisany maro mamakivaky ny araben'izy ireo isan'andro, angamba toerana tsy tranainy tratran'io. Etsy ankilany, ny mponina dia efa nanohitra hatry ny ela ny zavatra heverin'izy ireo ho fanafihan'ny mpizahatany, izay tsy manaja ny fihetsiny indraindray satria misy ireo mandro ao amin'ny Canal Grande na mandoto ny tanàna manome endrika ratsy an'io.
Raha ny marina, ny volana jolay lasa teo dia mponina 2.500 no naneho fihetsiketsehana tao amin'ny foibe manan-tantara izay noheverin'izy ireo ho fanamavoana ny tanànany. Tamin'izany fomba izany no nanirian'izy ireo hisarika ny sain'ny UNESCO sy ny Filan-kevitry ny Tanàna mba hisorohana an'i Venise tsy ho tonga mpizahatany fa tsy tanàna honenana. Ary izany dia isan'andro ny mpizahatany Venice ary vitsy ny mponina ao aminy. Amin'ny maha-te hahafanta-javatra, amin'ny 2017 dia tsy misy afa-tsy 55.000 ny mponina raha ampitahaina amin'ny 137.150 tamin'ny fiandohan'ny taona 60.
Tahaka ny ahoana ny Plaza de San Marcos?
St. Mark's Square no fon'ny Venice ary iray amin'ireo kianja malaza indrindra manerantany. Any amin'ny ilan'ny Grand Canal no misy azy ary ao no ahitantsika ireo tsangambato maro samihafa sy toerana mahaliana ara-tantara-ara-kolontsaina toa ny Doge's Palace, ny Bell Tower na ny Basilica, iray amin'ireo tempoly be sary indrindra eto an-tany.
Hatramin'ny niandohany, ny kianjan'i San Marcos dia faritra lehibe sy lehibe stratejika ao an-tanàna. Tsy amin'ny fomba fijery ara-politika ihany (satria izy io dia namboarina sy natsangana ho fanitarana ny lapan'ny Doge) fa koa ara-kolontsaina satria hetsika maro toy ny tsena, filaharana, fampisehoana an-tsehatra na diabe fanaovana karnavaly no natao tao.
Eto koa no misy voromailala an-jatony mandehandeha malalaka. Efa zatra ny fisian'ny olombelona izy ireo ka tsy hahagaga raha manatona anao izy ireo mangataka sakafo kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » Italia » Ny jiro fifamoivoizana dia hifehy ny fidirana amin'ny kianjan'i St. Marka manomboka amin'ny taona 2018